စတော့အိတ်ထဲတွင် နောက်ဆုံးရောင်းနေသော European Surge Protector Extension Socket ကို ဝယ်ယူပါ။
Electrical Embedded Power Track Socket မိတ်ဆက်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသိဉာဏ်ရှိသော ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အီလက်ထရွန်နစ် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးပြုသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Multi-functional desktop socket series နှင့် paperless အလိုအလျောက်စနစ် ထုတ်ကုန်များ လျှပ်စစ် Embedded Power Track Sockets များကို ကျွမ်းကျင်စွာ ထုတ်လုပ်ပါသည်။
Electrical Embedded Power Track Socket ၏ Package တွင် ပါဝင်ပါသည်။
1 x 50CM လမ်းကြောင်း
# 50CM လမ်းကြောင်း
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 250V
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ: 32A
လမ်းကြောင်း အရှည်- 500mm
အနံ 86 မီလီမီတာ
ရွေးချယ်နိုင်သောအရောင်- ငွေရောင်၊ အနက်ရောင်၊ ရှန်ပိန်ရွှေရောင်
# Orbital Movement Socket
မီးရထား ပလပ်ပေါက် ပါဝါရထားလမ်း အမျိုးအစား မိုဘိုင်းပလပ်ပေါက် အိမ်သုံးအတန်း ပလပ် မီးဖိုချောင် နံရံမျက်နှာပြင် ပေါက်ပေါက် အခမဲ့ ဖောက်စက်
Electrical Embedded Power Track Socket ၏ အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။
- ယံဖိုးကွဲ ဇယား။
- ဘယ်တော့မှ မပျင်းပါနဲ့။
- Sliding track socket ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အဆင်ပြေသည်၊ ကေဘယ်ကြိုးများကို နှုတ်ဆက်လိုက်သည်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။
- orbital motion socket ၏ စုစုပေါင်းပါဝါသည် Load power 8000W ဖြစ်သည်။
- 13A single adapter သည် ပါဝါ 2500W သယ်ဆောင်နိုင်သည်။
- စပယ်ယာအား တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးနှင့် ကြားနေဝါယာကြိုးကြား5စင်တီမီတာ အကွာအဝေးဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ စပယ်ယာသည် လျှပ်ကာကို ပတ်ထားပြီး လမ်းကြောင်းထဲသို့ ရေဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် သတ္တုအရာဝတ္ထုကို လမ်းကြောင်းထဲသို့ ထည့်လိုက်သည့်အခါ ယိုစိမ့်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
- လျှပ်ကာအလွှာဖြင့် ပတ်ထားသောကြောင့် မတော်တဆ လျှပ်စစ်ရှော့တိုက်ခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ထည့်သွင်းထားသော Power Track Socket ၏ လည်ပတ်မှုနည်းလမ်း ပါဝင်သည်-
1. လျှောပေါက် အခမဲ့။ အဒက်တာကို လမ်းကြောင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် လှည့်ခြင်းမရှိဘဲ လမ်းကြောင်းဆီသို့ အပြိုင်လျှောသွားနိုင်သည်။
2. အားဖြည့်ရန်အတွက် သင်သည် 90° နာရီလက်တံအတိုင်း လှည့်ရန်သာ လိုအပ်ပြီး သင်၏ socket အား အားဖြည့်ပေးပါသည်။ ပါဝါပိတ်ရန် adapter 45° ကိုဖွင့်ပါ။ ပါဝါရထားလမ်း ပလပ်ဖောင်းသည် သင်၏ အမျိုးမျိုးသော ဒက်တာစကတ်များကို မည်သည့်လှုပ်ရှားမှု၊ အခမဲ့နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော ပေါင်းစပ်မှုကို ထည့်သွင်းစေပါ။
Electrical Embedded Power Track Socket အတွက် အားသာချက်များ
1. Din Rail socket အသစ်တွင် ပစ္စည်း 14 ခု မူပိုင်ခွင့် ရရှိသည်။
2. Din Rail lenth and Colour: စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ် (ငွေ၊ ရွှေ၊ မီးခိုး၊ အနက်)
3. socket module အရောင်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။
4. socket module ဒီဇိုင်း- အဝိုင်းနှင့် စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန်
5. Din rail socket ဒီဇိုင်းနှစ်ခု- Surface နှင့် Reccessed (hidden)
6. ခြေရာခံခြင်း၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ယူပါ- သေးငယ်သော ကွာဟချက် ဒီဇိုင်း မြေပြင်ချိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ကာ သတ္တုအရာဝတ္ထုကို လမ်းကြောင်းအတွင်းပိုင်းသို့ တိုက်ရိုက်မကိုင်ထားပေ။
7. ပါဝါထိန်းချုပ်မှု- 90.C အား ပါဝါပိတ်ရန် စွမ်းအင်ပိတ်ရန်အတွက် နာရီလက်တံအတိုင်းပြန်လှည့်ရန် 90.C ကို လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။
8. overload protection switch ဖြင့် home switch ဒီဇိုင်း။
9. လျှောက်လွှာများ- အိမ်/မီးဖိုချောင်/ရုံးခန်း/ကွန်ဖရင့်ခန်း/တရားတော်များ/ဟိုတယ်/ဆေးရုံ
10. အာမခံ:3နှစ်
11.rated ဗို့အား: 250V
13.rated ပါဝါ: 8000W
15. အကန့်အရွယ်အစား- 60CM/80CM/100CM/120CM/150CM/200CM စိတ်ကြိုက်
16.adapter အမျိုးအစား- EU/BS/USA/Multi/AUS/နိုင်ငံတကာ ငါးပေါက်
hot Tags:: European Surge Protector Extension Socket၊ တရုတ်၊ စျေးပေါသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်